Obodo Blue nke Morocco | Akụkọ Njem
Obodo Blue nke Morocco
Agbanyeghị na enwere ike amataghị ya n’ụwa niile dịka ọzara Sahara, ma ọ bụ ama ama obodo dịka Marrakech ma ọ bụ Fez, Obodo a mara mma nke Moroccan bụ, na-enweghị mgbagha, nke kachasị ese foto na ugwu nke mba ahụ n'ihi oke ụlọ ndị ọcha na-acha anụnụ anụnụ malite na indigo ruo India ruo cobalt. Obodo pụrụ iche nke ị na-agaghị echefu oge ị gara Morocco ma ọ bụ n'oge ịnọ na Ceuta ebe ọ bụ na obodo a dị nso na ókèala Spain, ihe dịka 100 km.
A maara aha a, Chaouen, Xauen ma ọ bụ Chefchaouen, obodo a dị na mkpọda ugwu ugwu Tisouka na Megou, na Rif Mountain Range. N'ụzọ na-akpali mmasị, aha Chefchaouen na Berber pụtara "lelee mpi ndị ahụ", na-ezo aka n'ụdị mbụ nke ọdịdị ala abụọ ahụ.
1 Mmalite obodo
2 Kedu ihe ị ga-ahụ na Chaouen?
Tọrọ ntọala site na mullah na narị afọ nke XNUMX, Chaouen gbasaa site na ndị Juu na ndị Alakụba nyere ya ikuku nke otu obodo Andalusia na ndị na-abụghị ndị Alakụba ịbanye ebe a ekweghị ruo narị afọ nke XNUMX. Kemgbe ahụ, ọtụtụ ndị njem emeela njem ịga obodo Moroccan a iji nwee mmasị na agba na-acha anụnụ anụnụ na-adọrọ adọrọ nke si na mgbidi medina na ala na steepụ nke okporo ámá ya.
Ìhè-acha anụnụ anụnụ agwakọtara na-acha ọcha na-arụpụta na a pụrụ nnọọ iche ndo dị ka agba nke elu-igwe. N'ezie, ndị bi na ya na-eji ụda olu a mee ka ebe ahụ dị ọcha, na-eweta ịdị ọhụrụ na gburugburu ebe obibi ma na-edozi ya.
Kedu ihe ị ga-ahụ na Chaouen?
Ozugbo Chaouen, ọ bara uru ịga ije iji mata ebe akụkọ ihe mere eme. Iji nweta medina ahụ, ọ kachasị mma ịbanye site n'ọnụ ụzọ mbata wee gbagoo nke na-eduga na etiti akwara nke obodo ahụ, Uta el-Hamman square.
Oghere a bụ ezigbo ihe ncheta jupụtara na ncheta, uwe na ụlọ ahịa nka, nke ndị ọbịa na ndị obodo na-agagharị ma ọ bụ nwee kọfị n'otu n'ime kọfị ya. Site ebe a uzo ozo nke yiri nke ozo na-amalite n'aka nri, nke na-eduga n'azu ulo elu nke di na square.
Clọ elu a bụ ebe e wusiri ike nke dị ochie nke na mgbe e weghachisịrị ụlọ obere ihe ngosi nka nke agbụrụ, iji mụtakwuo banyere akụkọ ihe mere eme na omenala nke ebe a.
Ga-enwe ike ịga nnukwu ụlọ alakụba site na narị afọ nke XNUMX, nke na-egosi ụlọ elu octagonal nke bụ nhazi pụrụ iche na alakụba nke Morocco.
Site na ụlọ ịsa ahụ obodo nke Ras el Ma ruo na nke ikpeazụ nke steepụ ya na mkpọda ya, ọ bụrụ na ị bụ onye na-ese foto, ị gaghị ada mbà ịchọpụta akụkụ ndị a.
Na obodo ncheta ndị na-akpali ma gburugburu nke Chefchaouen bụkwa kwesịrị nleta. Otu a ka ọ dị n'okike ogige Akchour Chefchaouen, nke nwere waterfalls, gorges na ọhịa pine mara mma mara mma. Iji mee njem mmụta na-aga ebe a, enwere ike ịmara ebe mbido Puente de Dios, arch eke na-adị 35 mita elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Obodo Blue nke Morocco
Agwaetiti ndị Italia